မြောက်ပိုင်း ABSDF က လူသတ်မှုများ — မြန်မာဌာန
မြောက်ပိုင်း ABSDF က လူသတ်မှုများ
ABSDF မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (ကျောင်းသား တပ်မတော်-မြောက်ပိုင်း) မှာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၂၀ က ဖြစ်ရပ်ဟာ အခုတလော တကျော့ပြန်ကာ အင်တာနက် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ ပျံ့နှံ့နေပါတယ်။
ထိုင်း- မြန်မာနယ်စပ်ရှိ ABSDF မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (ကျောင်းသား တပ်မတော်) ၏ ဝေးကြီး ဗဟိုဌာနချုပ်တွင် နေ့လည်စာ စားနေကြသော ABSDF တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်း တွေ့ရစဉ်။
(Lee Yu Kyung/EPN)
၁၉၉၂ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလတုန်းက မြန်မာနိုင်ငံ ကချင်ပြည်နယ်မှာ အခြေစိုက်တဲ့ ABSDF မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (ကျောင်းသား တပ်မတော်-မြောက်ပိုင်း) မှာ ကျောင်းသား ရဲဘော်အနည်းဆုံး (၁၅) ဦးကို သူလျှိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ ညှဉ်းပန်းသတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီဖြစ်ရပ်မှာ သူလျှိုအဖြစ် အစွပ်စွဲခံရပြီး ကျောင်းသား တပ်မတော်အချုပ်ထဲ အကျဉ်းချခံခဲ့ရသူ ပန်းချီထိန်လင်း (လက်ရှိ လန်ဒန်) က မြောက်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေ သူ့ကို ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ကြောင်း၊ ဒီဖြစ်ရပ်ဟာ အုပ်စုနှစ်စုကြား အာဏာလုရာက ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ကြောင်း၊ နောက်ဆုံးမှာ အခြားသူတွေနဲ့အတူ သူကိုယ်တိုင် အချုပ်ကနေ တရုတ်နယ်စပ်ဖက်ကို ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်ခဲ့ကြောင်း RFA ကို ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုပါတယ်။
ကျောင်းသား တပ်မတော်မြောက်ပိုင်းမှာ အဲဒီအချိန်က ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ ABSDF ဗဟိုကော်မတီဝင်ဟောင်း ကိုအောင်နိုင်ကတော့ အဲဒီအချိန်က အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း တာဝန်အရ လုပ်ကိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး၊ ဖြစ်ရပ်မှန် ပေါ်ပေါက်ရေး အတွက် ABSDFအဖွဲ့က စုံစမ်းစစ်ဆေးရာမှာ သူ့အနေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ RFA ကို ပြောပါတယ်။
ဒီအကြောင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုဉာဏ်ဝင်းအောင်က တင်ပြထားတာကို နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ ABSDF တက်ရောက်မှာမဟုတ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်
ABSDF ဗဟိုကော်မတီဝင်ဟောင်း ဦးညီညီကျော် ထောင်သုံးနှစ်ချမှတ်ခံရ
မြဝတီမြို့ ABSDF ဆက်ဆံရေးရုံးအဖွဲ့ဝင်တွေ အဖမ်းခံရ
NCA ပွဲ တက်ရောက်မှု ABSDF ဗဟိုရဲ့ သဘောထားမဟုတ်
ABSDF (မြောက်ပိုင်း) ဒုဥက္ကဋ္ဌကို ဒုတိယအကြိမ် ရုံးထုတ်
ဒါဟာလူ႔အခြင့္အေရးကိုခ်ဳိးေဖာက္တာပါ။ အာဏာ၇ူးေတြရဲ႕အ၇ူးလုပ္ဇာတ္ထဲမွာ ခံလိုက္ရတဲ့ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားေတြကိုအရမ္းႏွေျမာမိတယ္။ လူမဆန္တဲ့ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေတြကိုေတြ႕ရတဲ့အခါမွာလည္း စိတ္ထဲမွာဘယ္လုိမွမခံစားႏိုင္ဘူး။ ဒီလုိအာဏာရူး၊ စစ္ရူးေတြကို ေလာကမွာဘယ္လုိမွမထားသင့္ေတာ့ပါဘူး။ အားလုံး၀ိုင္း၀န္းၿပီး ဒီအာဏာရူး၊ စစ္ရူးေတြကိုေလာကႀကီးထဲကေန ဖယ္ရွားႏုိင္ဖုိ႔ ၀ိုိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းၾကပါ
Where is Democracy, but begining fighting of yours ABSDF. Please put aside until your Democracy in hand. Hestitate to sacrified your comrades.
လက္ရွိ AB ရဲေဘာ္မ်ား ဆင္းရဲပင္ပန္းစြာေနတာေတြ႕ရတာ စိတ္မေကာင္းဘူး။ အျမန္ဆံုးျငိမ္းခ်မ္းၿပီးစိတ္ခ်မ္းသာေစမယ့္နည္းလမ္းကိုရွာေတြ႕နိဳင္ၾကပါေစ။
မိန္းမကိုယ္ထဲတုတ္ထုိးထည့္တာ၊ကိုယ္လက္အစိတ္အပိုင္းေတြခုတ္ ျဖတ္တာကလည္းတာ၀န္အရလား။ စစ္အစိုးရေတာင္ဒီေလာက္မရက္စက္ဘူး။မင္းလုပ္ခဲ့တဲ့ရာဇ၀တ္မႈအတြက္ျပန္ေပးဆပ္ရမယ္၊ေသေဘးကလြတ္ေျမာက္ခဲ့သူေတြအခုထိသက္ရွိထင္ရွားရိွေသးတယ္။တခ်ိန္တုန္းကသက္ေသေတြေပါ့။
I don't think Ko Aung Naing isahuman being. There must beareason he madeaplot to do. 1. He would beaspy from Gorvernment. 2. He wants to bealeader.3. Personal revenge to one or some of the vitims. The case started in 1992, why they didn't investigate well in these years and never announced anything related with this to public. There must beawicked idea in their mind obviously. He must be responsible for leading his group in those days.